जान्नुहोस्– आलियाको आगामी फिल्म RRR को कहानी के हुनेछ ?
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टको करियर यस समय शिखरको चुचुरोमै छ । आलियाले २०१२ मा रिलिजमा आएको करण जोहरको फिल्म ‘स्टुडेन्ड अफ द इयर’बाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन् । अभिनेत्री आलियाले करियरको छोटो समयमै सफलता हाँसिल गर्न सफल बनेकी छन् ।
यतिबेला उनले बलिउड उद्योगमा सुपरहिट अभिनेत्रीको रुपमा नाम जमाइसकेकी छन्, भने उनको हातमा कुनै पनि प्रोजेक्टको कमी छैनन् । केही अघि मात्रै पनि आलिया मेघा बजेटको फिल्ममा आबद्ध भएकी छन् ।
एसएसराजमौलीको मेघा बजेटको साउथ फिल्म (RRR) मा उनी आबद्ध भएकी हुन् । यसै फिल्मबाट आलियाले साउथ फिल्ममा पनि डेब्यु गदैछन् । यसै फिल्मको बारेमा आलियाका फ्यानहरु जान्न चाहन्छन् ।
यो फिल्म किन विशेष छ ?
यो फिल्मको कहानीको कुरा गर्नु भन्दा पहिले यो कुरा जान्न आवश्यक छ कि, यसै फिल्मबाट अभिनेत्री आलियाले साउथ फिल्ममा डेब्यु गर्दैछन् । यो फिल्ममा बलिउड अभिनेता अजय देवगन पनि मुख्य भूमिकामा देखिने छन् । यसै फिल्मबाट अजय देवगन र आलिया भट्ट एकैसाथ ठूलो पर्दामा सँगै देखिदैछन् । यसका साथै अभिनेत्री आलियाको करियरको सबै भन्दा महँगो फिल्म बन्दैछ । समाचारमा आए अनुसार यो फिल्म ३५० – ४०० करोड रुपैया बजेटको आसपासमा बन्दैछ ।
फिल्मको कहानी के हो ?
आलिया र अजय देवगनसँगै यो फिल्ममा राम चरण र जुनियर एनटिआर पनि मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् । यो फिल्मको कहानी सीता, राम, राजु र कोमराज भीमको भूमिकामा घुम्नेछ । यो दुई स्वतन्त्र सेनानीको जीवनको कहानी हो ।
रणवीर र आलियाको हुनेछ टक्कर !
फिल्मको कहानी २०१९ को ब्याकड्रपमा लेखिएको छ, ‘यसको टक्कर रणवीर कपूर स्टारर् ‘शमशेरा’सँग हुँदैछ ।’ रणवीर र आलियाको आ–आफ्नो फिल्म २०२० मा एकै दिन दर्शकमाझ रिलिजमा आउने भएको छ ।